राजनीति – Page 14 – Radio shreenagar
‘चपली हाइट–३’को छायाङ्कन सकियो
काठमाडौं । नेपाली कथानक चलचित्र ‘चपली हाइट–३’को छायाङ्कन सकिएको छ । निकेश खड्काले निर्देशन गरेको चलचित्र छायाङ्कन ३२ दिनमा सकिएको निर्माता अर्जुनकुमारले जानकारी दिए । सस्पेन्स थ्रिलर चलचित्रमा स्वस्तिमा खड्का, सुपुष्पा भट्ट, आमिर गौतम, महेश त्रिपाठी, प्रतीक श्रेष्ठ लगायत मुख्य भूमिकामा छन् । चलचित्र चैत २८ गते रिलिज हुने छ ।
परदेशमा नामी खेलाडी स्वदेशमै ओझेलमा
जनकपुर । नेपालका सञ्जय श्रेष्ठ र लालमोहर यादवलाई भारतमा भर्खरै सम्पन्न भएको प्रो कबड्डी लिगको सिजन ७ का लागि बेंगलोरस्थित बेंगलुरु बुल्सले जनही १०–१० लाख भारुमा अनुबन्ध गरेको थियो । धनुषाका सञ्जय स्वतन्त्र खेलाडी हुन् भने सिरहाका लालमोहर त्रिभुवन आर्मीका लागि खेल्छन् । सन् २०१४ मा भारतको जयपुरमा भएको पहिलो सिजनदेखि नै सञ्जय निरन्तर आर्थिक लाभ लिएर विभिन्न क्लबका तर्फबाट खेल्दै आएका हुन् ।
चितवन पीपीएलको फाइनलमा
पोखरा । बाबर हायात र रोहन मुस्तफाको अर्धशतकको सहयोगमा चितवन राइनोज दोस्रो संस्करणको पोखरा प्रिमियर लिग (पीपीएल) टि–ट्वान्टी क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । मंगलबार भएको खेलमा चितवनले काठमाडौं गोल्डेन वारियर्सलाई ६० रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको हो । पोखरा रंगशालमा भएको खेलमा चितवनले काठमाडौंलाई जितका लागि दिएको १६८ रनको लक्ष्य काठमाडौंले २० ओभरमा ९ विकेट गुमाउँदै मात्र १०७ रन बनायो । काठमा
एकैदिन किन पक्राउ परे १२२ चिनियाँ नागरिक ? चीनले देखायो चासो
काठमाडौं । काठमाडौं १२२ चिनियाँ पक्राउ परेपछि चीनले त्यसबारे चासो व्यक्त गरेको छ । आफ्ना नागरिक एकैदिन सयौंको संख्यामा पक्राउ परेपछि त्यसको कारणबारे चासो व्यक्त गरेको हो । ‘‘हामीले काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासलाई १२२ जना पक्राउबारे औपचारिक जानकारी गराएपछि उनीहरूले के–कति कारणले पक्राउ परेका हुन् ? कस्ता–कस्ता अपराधको आशंका छ ? भन्दै चासो देखाउनुभयो,’’ नेपाल प्रहरीका एक अधिकारीले भने । नेपालमा
नक्कली नोट कारोबारमा संलग्‍न भएको भन्दै चार बंगलादेशी पक्राउ
भक्तपुर । नक्कली नोटको कारोबारमा संलग्‍न रहेको आरोपमा चारजना बंगलादेशी नागरिकहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरूमा भक्तपुर लोकन्थली बस्‍ने बंगलादेशी नागरिकहरु २६ वर्षीय सुमन खान, ४१ वर्षीय अलि अहमद, २१ वर्षीय रोबेल मिक्दा र २१ वर्षीय महमद उल्लाहा रहेका छन् । भक्तपुर थिमी नगरपालिका–१ मा रहेको परिधि गिफ्ट सपबाट गत बिहीबार बेलुका सामान खरिद गरी सुमनले नक्कली नोट २ हजार नेपाली रुपैयाँ द
हुम्लाकाे श्रीनगर डिपाेमा चामल कुहिएकाे बितरण,धमाधम फिर्ता गर्दै
रेडियो श्रीनगर हुम्ला पौष १० हुम्ला । हुम्लाको श्रीनगर खाद्य डिपोमा कुहिएको चामल बिक्री बितरण भएको छ । दशै अगाबै डिपोमा पुग्नु पर्ने चामल ढिलै समयमा पुयो तर कुहिएको चामल पुगेको छ । धनगढी मार्तडी हुँदै श्रीनगर पुगेको ३ सय कईन्टल मध्ये १ सय कुईन्टर बीक्री बितरण भएकोमा केही चामल कुहिएको भेटीएको र जस मध्ये ४ जनाले चामल फिर्ता गरी सकेका श्रीनगर खाद्य डिपोका प्रमुख चन्द्र बहादुर पुनले बताए ।
अपहरित अध्यक्ष शाही १८ घण्टापछि मुक्त
सोमवार, पुष ७, २०७६ सुर्खेत । शनिबार बिहान आप्mनै घरबाट अपहरणमा परेका दैलेखको ठाटीकाँध गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीलाई प्रहरीले अपहरण मुक्त गरेको छ । दैलेखबाट कालीकोट हुँदैं साविकको कर्णालीका अन्य जिल्लातर्फ लिदैं गरेको अवस्थामा कालीकोटबाट खटिएको प्रहरीले दैलेख र कालिकोटको सीमानामा पर्ने सुभकालिका गाउँपालिकाको छाती गाउँको जंगलबाट आइतबार साँझ अपहरण मुक्त गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काली